तपाईं इतिहास आनन्द यदि एक डेन्यूब नदी क्रूज लिन, उत्कृष्ट खाना, र अविस्मरणीय अनुभव. मा एम्स्टर्डम को आधुनिक शहर मार्फत यात्रा पश्चिमी युरोप बिस्तारै पूर्वी युरोप बित्दै जाँदा मा उतरती कि डेन्यूब मा ऐतिहासिक स्थलहरू, यस्तो सल्जबर्ग रूपमा (संगीत को शहर), वा विनाश बारहरू भ्रमण गर्न बन्द हाम फाल्न आधुनिक बुडापेस्ट. युरोपेली नदी परिभ्रमण यस संग्रह नयाँ अनुभव भरिएको dreamlike ठाउँ मा दूर तपाईं झाडू हुनेछ, ठाँउहरु, ध्वनि, गन्ध, and gastronomic encounters.
रोन नदी एक ऐतिहासिक नदी छ स्विट्जरल्याण्ड र फ्रान्स र सबैभन्दा महत्वपूर्ण waterways एक युरोप. यो छ कुनै आश्चर्य यो हाम्रो सूची छ5अन्वेषण गर्न युरोपमा सबै सुन्दर नदीहरू.
यस शहर को धेरै तिनीहरूलाई पहिचान सुविधा, आफ्नो अस्तित्व परिभाषित, र शहर हृदय मार्फत चल्छ कि नाडी रूपमा कार्य. पेरिस मा Seine नदी नदी थेम्स लन्डन के छ, बुडापेस्ट गर्न डेन्यूब. यो epicenter छ, यस क्षेत्र पर्यटकहरू माईग्रेट गर्दछ, जहाँ तिनीहरूले पालन प्रसिद्ध आकर्षण and capture memories.
हामी तपाईंलाई शाब्दिक बस प्रस्तावित Seine परिभ्रमण कुनै पनि एक बारेमा चयन गर्न सक्नुहुन्छ लाग्छ र तपाईं निराश हुनेछैन! तपाईं पेरिस को सबै भन्दा राम्रो हेर्न सक्षम हुनेछ, प्रेम शहर. आफ्नो रुचि व्यापक लिएर छ. समय सीमित छ भने, परिभ्रमण तपाईंको छोटो समय मा फिट उपलब्ध छन्. अझ राखे-फिर्ता अनुभूति लागि, एक Seine खाने क्रूज आनन्द, एफिल टावर र Louvre संग्रहालय मा हेर्न, तपाईंलाई सेल रूपमा. वा तपाईंले एउटा विशेष कम्बो लागि यी आकर्षण र क्रूज संयोजन गर्न सक्छन्, दोस्रो तलामा चढ्नु, विचार पराउँछु, अनि तेस्पछि एक डुङ्गा यात्रा, खाने र रमाइलो लिन रक्सीको गिलास. तपाईं पनि यदि तपाईं त फैंसी एक Moulin रूज शो मा लाग्न सक्छ? वास्तविक पेरिस हेर्न, एक Seine क्रूज अवश्य छ.
सानो नदी, नहरहरुमा, र नेदरल्याण्डको अन्तर्देशीय समुद्रहरू डच जलमार्ग बनाउँछन्, र यहाँ cruising युरोप र उनको स्ट्राइकिङ् कम देशहरूमा अन्वेषण गर्न एक आराम तरिका हो. एम्स्टर्डम र रोटर्ड्याम शहर वरिपरि यात्राहरु अक्सर मार्गहरू देखा, तर एक को हाइलाइट डच Waterways नदी क्रूज को श्रृंखला छ 19 Kinderdijk को क्षेत्र मा नहर बैंकहरू लाइन प्रामाणिक वायुघट्टहरू. तपाईंको क्यामेरा तयार हुनुहोस्.
उत्तिकै सुन्दर Keukenhof मा पुष्प प्रदर्शित छन्, सबै भन्दा ठूलो फूल बगैचा. रंग को अचम्मलाग्दा गलैँचा सात लाख तुलिप्स द्वारा बनाईएको हो, daffodils, र अन्य फूलहरू - तिनीहरूको उत्कृष्ट उत्कृष्टमा अप्रिल र मेको बखत. विशेष डच बल्ब क्षेत्रहरू ध्यान वर्ष को यो समय मा छोटो परिभ्रमण लागि बाहिर हेर.
सबै सवार! बुक गर्नुहोस् जुन तपाईंको नदी यात्राको साथ टिकटलाई ट्रेन गर्दछ एक ट्रेन सेव आज र समुद्री यात्रा हुन्छ!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 सबैभन्दा सुन्दर नदीको युरोप मा अन्वेषण गर्न” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-rivers-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#यूरोपियर्स #imonaboat #नदी क्रूज #rivertrips